Dhismihii kaniisada Kismaayo oo loo rogey Masaajid. | Nabadi caadalad ayaa kaa horresa
Dhismihii kaniisada Kismaayo oo loo rogey Masaajid.	Seteembar 30, 2008
KN: Dhismihii kaniisadii talyaaniga uu ka dhisey Kismaayo xiligii gumeysiga ninka cad, ee ku tiiley kasoo horjeedka beerta Xoriyada iyo saldhiga Police-ka ayaa maanta laga bilaabo noqoneysa masaajid salaada lagu tukado, sidaasi waxaa salaadii ciida ka dib ku dhawaaqay maamulka islaamiga ah ee Kismaayo.
Isagoo la hadlayay kumanaan dad ah oo isugu soo baxay salaadii ciida fagaaro Kismaayo ku yaala ayuu Sheekh Xassan Yacquub oo ah xoghayaha saxaafada ee maamulka islaamiga ah ee Kismaayo ku dhawaaqay in maanta oo bisha soonfur tahay koow laga bilaabo loo rogey dhismihii kaniisada Kismaayo masaajid lagu cibaadeysto.
Wuxuu sheegey in talaabadani loogu aarayo masaajidkii weynaa e magaalada Harare e boqorkii xabashida Minilik u rogey kaniisad ay yuhuuda geeska Afrika sheeydaamada ku caabudaan, wuxuu intaasi ku daray in balad islaam aysan marnaba suurogal ahayn in ay ka dhex taagnaato kasiisad lagu caabudi jirrey illaah qeyrkii, ayna tahay in astaantaasi la burbursho. sidaa darteed waxaa loogu magac daray Masjudl Harar.
Kaniisada waxa ay ku taalaa kasoo horjeedka fagaaraha beerta Xoriyada oo dhinaca ku haya saldhiga Police-ka, waxaana wali ka muuqda astaamihii kaniisada oo uu ka kid yahay macatabkii iyo munaaradii.
Waxaa kaniisada ku hor yaala sanamyo wallow ay ay yihiin astaamo Soomaaliyeed oo muujinaya xornimada, qoraalana ay ku dul xardhanyihiin, laakiin mar haddii meesha masaajid laga dhisey ma haboona in sanam uu ku hor yaalo goob lagu cibaadeysto wuxuu dooniba ha ahaadee.
Kaniisadani waxay ka mid ahayn dhow kaniisadood oo dalka uu talyaaniga ka dhisey, kuwaa oo xoriyadii ka dib iyo dowladihii is xirxigey aysan waxbo ka qaban, waxbana ka badalin, sidoodiina u shaqayn jirreen, xittaa xiligii burburka ma ahayn kuwa wax laga qabtay.
Kaniisada ugu weyneyd waxay ku taala caasimada dalka Xamar, waxay ku taalaa degmada Shangaani, gaar ahaan agagaarka daartii Jirde Xusseen , Hotel Curubo iyo bangigii ganacsiga , gaar ahaan waxay si toos ah oga soo horjeedaa saldhiga Police-ka Shangaani, laakiin kaniisadaasi waxa ay tan Kismaayo oga duwantahay waxaa soo gaaray burbur baaxad leh, oo dhismihii oo dhan ayaa dhulka cuskaday, waxa kaliya oo ka haray munaaradii macatabka uu ku dul yaalo.
Waxaa kaloo jirro dhowr astaamood oo kale oo gumeystaha ka tagay, waxaan tusaale usoo qaadan karnaa qabri nin gaal talyaani ah looga dhisey bartamaha Degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, wali waa uu taaganyahay qabriga, wuxuuna ku yaala meel aan ka fogeyn fagaaraha calanka ama Shanta Dab.
Waa talaabo haboon oo dhanka wanaagsan loo qaaday, dadka gobolkana aad ayay usoo dhaweeyeen.
Dhismaha kaniisada ahaan jirrey ma lahan wax burbur ah oo soo gaaray, sidiisii ayuu u taaganyahay, waxaa la sheegey in ey qoysas degenaayeen sanidihii ugu dambeeyey, lamina oga halka qoysaskaasi loo rari doono.
Masaajidka dhismaha laga dhigey wuxuu noqon doonaa mid meel haboon ku yaala marka la eego goobta uu ku yaalo, wuxuu noqonayaa masaa’jidka ugu dhow, uguna haboon ee ay ku cibaadaystaan dadka ku ganacsada Suuq Yare iyo Imbiritooriyada iyo Qacle, masaajidka kale ee suuqa u dhow wuxuu ku yaala agagaarka Samali Star iyo suuqii Balcad, halka ay jirraan labbo kale oo suuqa ka yara fog waanan kan Calanleey iyo kan Xaaji Jaamac.